Waxa ay heli doonto kooxda guuleysata, xeerka dhanka garsoorka ee ciyaarta, kooxda doorka martida qaadan doonta, xafladda furitaanka iyo jawaabaha su’aalaha laga yaabo inaad iska weydiineyso Fiinaalka UCL ee caawa – Gool FM
Waxa ay heli doonto kooxda guuleysata, xeerka dhanka garsoorka ee ciyaarta, kooxda doorka martida qaadan doonta, xafladda furitaanka iyo jawaabaha su’aalaha laga yaabo inaad iska weydiineyso Fiinaalka UCL ee caawa
(Porto) 29 Maajo 2021. Warbixinnada la xiriira Fiinaalka tartanka Champions League ee ay isku arkayaan kooxaha Manchester City iyo Chelsea ayaa dhinacyo badan taabanaya, waxaana qoraalkan idin kula wadaageynaa su’aalaha laga yaabo inaad isku weydiineyso ciyaarta caawa.
Kooxaha wada ciyaaraya:
Manchester City oo ciyaareysa fiinaalkeedii ugu horreeyay ee tartanka Champions League ayaa wajaheysa Chelsea oo ciyaareysa fiinaalkeedii saddexaad ee tartankan iyadoo sidoo kale tartanka ku guuleysatay sanadkii 2012.
Goormee ayay dhici doontaa?
Caawa oo ay taariikhda ku beegan tahay 29 May 2021 ayaa la dheeli doonaa kulanka, waxaana la baasan doonaa 10:00 habeennimo xilliga Geeska Afrika.
Garoonka Estádio do Dragão oo ah garoonka kooxda FC Porto isla markaasna ku yaalla magaalada Porto ee dalka Portugal ayaa marti gelin doona kulanka caawa, waxaana garoonkan uu hore u marti geliyay fiinaalkii tartanka UEFA Nations League ee sanadkii 2019, waxaana la dhisay sanadkii 2004.
Fiinaalka caawa ayaa markii hore u qorsheysnaa in lagu qabto garoonka magaalada Istanbul ku yaalla ee Atatürk Olympic Stadium, hase ahaatee, xannibaadda la xiriirta Koofid-19 oo ay dowladda Turkiga soo rogtay ayaa kalifay in ciyaartan loo weeciyo Portugal.
Taageerayaal miyaa soo geli doona garoonka?
Dowladda Portugal ayaa ogolaatay in 33% kuraasta garoonka ay fariistaan taageerayaal gaaraya 16,500 oo ruux, waxaana labada naadi ee fiinaalka ciyaaraya loo ogolaaday inay iib geystaan min 6,000 oo tikit, dhanka kalena, waxaa dadka guud ee ciyaartan usoo daawasho tagaya laga iibin doonaa tikidho gaaraya 1,700 oo tikit oo ay ciyaarta ku daawan karaan.
Sidee u daawan kartaa?
Bogga rasmiga ah ee UEFA ayaa lagu shaaciyay waddammada dunida iyo kanaallada ay ciyaarta caawa ka daawan karaan, waxaadna kaga bogan kartaa Link-gan.
Maxay heli doonaan guuleystayaasha?
Koobka ay qaadi doonto kooxda guuleysata ayaa culeyskiisa lagu sheegay 7.5 kg (Toddobo Kiilo iyo bar) halka dhererkiisa uu yahay 73.5cm.
Sidoo kale, kooxda tartanka ku guuleysata waxay si toos ah u aadi doontaa wareegga Guruubyada Champions League ee xilli ciyaareedka xiga xitaa haddii ay kaalamaha ugu sarreeya horyaalkeeda kusoo bixi weyso, balse Man City iyo Chelsea goor hore ayayba xaqiijiyeen booskooda UCL ee fasalka dambe.
Miyaa la isticmaali doonaa VAR?
Aaladda muuqaal caawiyaha garsoorka ee Video Assistant Refree (VAR) ayaa loo isticmaali doonaa fiinaalka Champions League.
Waa kuma garsoorka ciyaarta?
Waxaa ciyaartan dhex-dhexaadin doona Antonio Miguel Mateu Lahoz oo ah 44-sano jir Isbaanish ah kaasoo sidoo kale ku jira garsoorayaasha dhex-dhexaadin doona ciyaaraha tartanka UEFA EURO 2020 ee xagaagan la ciyaari doono.
Immisa xiddig ayaa lasoo xulan karaa? Immise ayaana baddel kusoo geli karta?
Labada macallin ayaa kulankan usoo xulan kara guud ahaan 23 xiddig, waxaana la oggol yahay illaa iyo shan baddel, halka sidoo kalena kooxaha loo ogolaan doono baddel lixaad haddii ciyaarta lagu daro 120 daqiiqo.
Miyey jiri doontaa xaflad lagu daah-furayo fiinaalka?
Muusikiistaha Mareykanka ah ee Marshmello ayaa bandhig ka sameyn doono garoonka ay ciyaarta ka dhaceyso kahor inta aanan la baasan kulanka, waxaana bandhiggaas taabo gelineysa shirkadda cabitaannada ee Pepsi.
Ugu dambeyn, yaa noqon doona kooxda martida loo yahay?
Markii la sameynayay isku aadka wareegga siddeed-dhammaadka, qaybta ay jirtay Manchester City ayaa heshay marti gelinta kulankan ama in iyadu ay tahay kooxda martida loo yahay, waxaa xusid mudan in labada naadi ay ku ciyaari karaan maaliyadahooda koowaad, balse haddii ay midab ahaan isaga hor imaanayaan, waxaa lebiska laga baddeli doona Chelsea oo marti mataleysa.
Taariikhda kooxaha Ingiriiska ee isaga hor imaaday Fiinaalka UCL... (Man City oo taariikhda England wax kusoo kordhisay, lagana yaabo taariikh kale inay dhigto)